Start with P to T – HlaMin
Category: Start with P to T
Bogyoke (Then) Architect of Burma’s Independence Promised to return to Civilian Life after Independence Bogyoke (Now) Low ranking officer in the Top Heavy army “Yes Man” of his bosses No conscience to plunder houses, associations and places of worship All “Atta Hita” and No “Parahita” Void of Metta, […]
Credit : Tekkatho Moe War ” တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း မှသည်….” အသံဗလံ၊ ဆူညံပွက်လော ဟိုက်မော ထိခိုက်၊ နား၌ ခန္ဓာ၌ တူးနှိုက် ဆုံးတိုင်၊ အခြေမခိုင်တော့….။ တစ်လောကလုံး၊ အုံးအုံးကျွက်ကျွက် ဘဝဂ်တိုင်အောင်၊ ဗလောင်ဝှန်ဆူ နေပူလည်းနှိပ်စက်၊ ထွက်သက်လည်းမမှန် ဒဏ်ရာ ရှာမရ၊ နုန်းခွေလျနှင့်။ တစ်လောကလုံး၊ တရုန်းရုန်းဖြစ် သနစ်သကန်၊ အသံဗလံ ဆူညံ ညစ်ညမ်း၊ စိတ်ကိုဖမ်းချုပ် ရုပ်ကိုလည်းမနိုင်၊ ငါမပိုင်သလို….။ သည်နေ့တော့ဖြင့် ဖျောလျော့ မထင်၊ နေခြည်မျှင်ရိပ် တိတ်ဆိတ်လျက်ပင်၊ ဟင်းလင်းပြင် အခင်း ငြိမ်သက်ခြင်းတစ်ခု၊ ရင်တွင်းသိမ့်နွေး ငြိမ်းအေးခြင်းရသ အင်အားပြတဲ့၊ စူးရှ ဖောက်ထွင်း […]
Toadies and Gen L
MAL, Toadies and Gen L areaBunch of Unethical, Heartless, Shameless, Senseless, Idiotic, Cowardly, Treasonous Killers, Kidnappers, Robbers, Thieves and Rapists. Feedback While the entire country has been horrified by loss of human lives especially young children, the non-elected leader of brutal regime celebrates . How disgusting! […]
ဒေါင်းStricken Peacock Striking / Fighting Peacock Victorious / Dancing Peacock
Credit : U Aung Myaing “Myanmar Spring Revolution“ The Skies above Myanmar acknowledge and reverberate the Determination and Courageous Acts of the Civil Disobedience Movement (CDM) Members, Generation Z, Y and X and Prayers of Generation Boomers. As the blackness is going to lift shortly, we have started […]
Terrorists Hit men MEC MEHL Two Veto Powers
Terrorists Rely On Armored Vests Murder Weapons Pa Htwes / Godfathers Notorious Lobbyist Dhammantaye Wicked Yadaya Deadly Spells